Aasaasihii Wikileaks Julian Assange ayaa laga xayuubiyey dhalashadii Ecuador | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Aasaasihii Wikileaks Julian Assange ayaa laga xayuubiyey dhalashadii Ecuador
Ecuador ayaa dhalashada kala noqotay Julian Assange, aasaasihii shabakada Wikileaks oo hada ku jira xabsi kuyaala dalka Ingiriiska.
Nidaamka sharciga ee dalka Ecuador ayaa si rasmi ah u ogeysiiyay Australian-ka in ay tahay wax aan waxba ka jirin dhalashadiisa warqad u timid oo jawaab u ah sheegasho ay soo gudbisay waaxda arimaha dibada ee wadanka Koonfurta America.
Jinsiyad qaadashada waxaa loo arkaa mid waxyeello leh marka lagu bixiyo iyadoo lagu saleynayo qarinta xaqiiqooyinka la xiriira, dukumiintiyada been abuurka ah ama khayaanada
Masuuliyiinta Ecuador waxay sheegeen in warqada dhalashada Assange ay kujiraan waxyaabo badan oo aan iswaafaqsaneyn, saxiixyo kaladuwan, isbedelka suurtagalka ah ee dukumiintiyada iyo khidmadaha aan labixin, iyo waxyaabo kale.
Carlos Poveda, oo ah qareenka Assange ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Associated Press in go, aanka la qaatay iyada oo aan loo marin hanaan sharci ah isla markaana aan loo ogolaan Assange in uu ka soo muuqdo kiiska.
“Taariikhda (Assange) la soo xigtay, waxaa laga qaaday xorriyadiisa waxaana dhibaato caafimaad ka haysatay xarunta lagu hayo ee lagu hayey,” ayuu yiri Poveda.
Poveda wuxuu sheegay inuu racfaan ka qaadan doono in lagu daro oo la caddeeyo go’aanka. In ka badan muhiimada dhalashada, waa arrin ah in la ixtiraamo xuquuqda oo la raaco maxkamad cadaalad ah marka lagala laabanayo dhalashada. ”
Assange waxaa la siiyay dhalashada Ecuador bishii Janaayo 2018 taasoo qeyb ka ah isku daygii dhicisoobay ee xilligaas dowladdii Madaxweyne Lenín Moreno ee ka dhigtay dibloomaasi si looga saaro safaaradda London.
Isniintii, maxkamadda Pichincha ee arrimaha maamulka ee la isku haysto ayaa rogtay go’aankan.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ecuador waxay AP u sheegtay in maxkamaddu “si madax bannaan u hawlgashay oo ay raacday maxkamad caddaalad ah oo ku saabsan kiis dhacay intii lagu jiray maamulkii hore oo ay keeneen isla maamulkii hore.”
Assange, oo 50 jir ah, wuxuu ku jiray xabsi ammaankiisa aad u sarreeyo Belmarsh oo ku yaal London tan iyo markii la xiray bishii Abriil 2019 si uu uga boodo damaanad toddobo sano ka hor intii lagu jiray dagaal sharci oo gooni ah.
Assange ayaa todobo sano ku qaatay safaarada Ecuador ee London, halkaas oo uu ka qaxay sanadkii 2012 si looga fogaado in loo gacan galiyo Sweden isagoo ku eedeyay kufsi iyo faraxumeyn.
Iswiidhan waxay joojisay baaritaanka dambiyada galmada bishii Nofeembar 2019 maxaa yeelay waqti aad u badan ayaa dhaafay.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa Assange ku soo oogay 17 eedeymo ah basaasnimo iyo mid ka mid ah eedeymaha ku saabsan xadgudubka kumbuyuutarka ka dib markii ay daabacday WikiLeaks kumanaan dukumiinti oo sirta ciidamada iyo dublamaasiyada ah. Eedeymaha ayaa qaadaya ciqaabta ugu badan ee 175 sano oo xabsi ah.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa sheegay in Assange uu si sharci daro ah gacan uga siiyay falanqeeyaha sirdoonka milatariga Mareykanka Chelsea Manning si uu u xado telegramyada sirta ah iyo feylasha militari ee WikiLeaks markii dambe daabacday.
Qareenada Assange waxay ku doodayaan inuu u shaqeynayay suxufiyad wuxuuna xaq u leeyahay in la ilaaliyo hadalka xorta ah ee wax ka bedelka koowaad ee daabacaadda dukumiintiyada muujinaya khaladaadka militariga Mareykanka ee Ciraaq iyo Afghanistan.
Horraantii bishan, Maxkamadda Sare ee Britain waxay u oggolaatay dowladda Mareykanka inay racfaan ka qaadato go’aanka ah in aasaasaha WikiLeaks aan loo diri karin Mareykanka si uu ula kulmo eedeymo basaasnimo.
Bishii Janaayo, garsooraha maxkamadda hoose ayaa diiday codsi Mareykan ah oo Assange loogu dirayo Mareykanka.
Aasaasihii Wikileaks Julian Assange ayaa laga xayuubiyey dhalashadii Ecuador was last modified: July 28th, 2021 by Admin